Indlela "Kogitum" ngesikhathi kunqanda zokukhuluma: ukubuyekezwa, yokusetshenziswa
Ibambezelekile zokukhuluma - esinye sezifo nzima kakhulu ukwenzeka izingane phakathi neminyaka yokuqala yokuphila. Naphezu kweqiniso lokuthi kumiswa inkulumo singumuntu, kukhona kwezinkambiso ezithile zeminyaka yobudala.
Ukusiza ingane ikwazi ukuthuthukisa ezingeni nontanga yabo neurologists nodokotela bezingane ukuncoma ngemithi ekhethekile. Ochwepheshe ngokuvamile ukunquma "Kogitum" ngesikhathi kunqanda zokukhuluma. Izibuyekezo abazali mayelana nalesi izidakamizwa ahlukana. Kuwufanele ukuthi ukunikeza lolu izidakamizwa ukuze ingane? Ake sizame ukuqonda.
ulwazi olujwayelekile mayelana nokulungiselela
"Kogitum" - tonic, imithi adaptogenic ezingathinta isimiso sezinzwa esiyinhloko futhi kujwayeleke izinqubo ezenzeka kuwo. The main ingxenye esebenzayo izenzo potassium atsetilaminosuktsinat - into kuholela esimweni asebenzayo atsetilaminoyantarnuyu acid. Lesi sakamuva itholakala izicubu isimiso sezinzwa futhi unesibopho ukudluliswa "efanele" inkanuko.
Inkampani French zemithi, kuyinto umkhiqizi "Kogituma" usho ukuthi imfuyo asebenzayo kunemiphumela eyingozi immunomodulatory kanye oyenza izinqubo ukukhiqizwa immunoglobulin, ayisiza kanye namasosha omzimba. The njalo kunazo okunqunyiwe "Kogitum" ngesikhathi kunqanda zokukhuluma. ochwepheshe lezivakashi zisikisela ukuthi omunye imithi eminye esebenza ngempumelelo kakhulu kungaba nethonya evelele zokwelapha kanye usazoba ngokuphelele ephephile ingane.
Ngokusho imiyalelo, umuthi ezinqunyiwe ngaphansi izinkomba ezilandelayo:
Asthenia (functional) iziyaluyalu. Ukukhathala ukuthuthukisa ku isizinda ezinye izifo lapho yamukelwa "Kogitum" akuvunyelwe. Ngakho-ke, lapho ukuthola izimpawu isifo kufanele afune ngokuyinhloko, uthintane onguchwepheshe;
Ukucindezeleka omnene. Umuthi ngokuvamile yaphathwa ukwelashwa;
disorder Neurotic. Neurosis kungavuka kokubili ngabantwana nangabantu abadala. "Kogitum" angaqoka ngokuhlanganyela sedatives.
Ngo umkhuba ezingane lokuqoka "Kogitum" ngesikhathi kunqanda zokukhuluma. Izibuyekezo izidakamizwa wathola ezihlukahlukene kokubili kusuka odokotela kanye kubazali. Umenzi uncoma ukuqala ukwelashwa, le mithi kuphela uma ingane oneminyaka engu-7.
"Kogitum" kokusisiza ukuba sibhekane nesimo iziyaluyalu zezinzwa nangokwengqondo ezinganeni. Akunikeze imithi kulezi zimo ezilandelayo:
ngesikhathi ukubambezeleka ngokomzimba, ngokomzwelo, ngokwengqondo, ukuthuthukiswa lengqondo;
e nezifo zengqondo (dlala);
lesi sifo ukukhathala okusheshayo ngokomzimba nangokwengqondo;
Ukulungiswa disorder ;
sifo umonakalo perinatal ukuze isimiso sezinzwa;
Ibambezelekile zokukhuluma - kuyini?
isifo ezinjalo ezinkulu, njengalezo ukubambezeleka inkulumo kungenzeka ngokumelene isizinda ezihlukahlukene izici zokwakheka kanye nesakhiwonchanti setenhlalo. Ngokuvamile, isizathu itholakala pathologies ezihambisana ne umonakalo ebuchosheni kwesikhathi perinatal. Lezi zifo zihlanganisa ukulimala lapho umuntu ezalwa, ukungondleki, ukutheleleka intrauterine, asphyxia ngesikhathi sokuzalwa, meningitis encephalitis esikhathini ezisanda kubelethwa.
Okungekuhle ukuthuthukiswa kwezemvelo ingane futhi waba nomthelela omubi zokukhuluma. Ukuntuleka kokukhulumisana emkhayeni, usizi olungokomzwelo, overprotection - izizathu okuyinto ukuthi umntwana usuke engakabi ubudala ukuthuthukiswa lulwimi lolufanele.
Uma ingane ukuba kweminyaka emine amadili ezimbi nge izingxenye eziningana, enkulumweni yakhe incoherent futhi engaqondakali, abazali Kuyaphuthuma ukuba zifune usizo kudokotela oyisazi sezinzwa ngezindleko. izidakamizwa zemithi kunqunyiwe sekuhloliwe wengane kanye imbangela, okwabangela nokubambezeleka of zokukhuluma (SPP). Ezinganeni, lesi sifo zingelashwa ngempumelelo ukulungela "Kogitum". isixazululo ikakhulukazi ngempumelelo ngesikhathi okuhlushwa ngenela ngeziphambeko ukuziphatha (umhayizo, neurosis). Ngaphezu yokwelapha izidakamizwa, uboniswa ngokuvakashela nokuvuselelwa amakilasi ekhethekile.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa kungenziwa kuphela udokotela (isazi sezinzwa noma wezingane). Ochwepheshe kakhulu batusa unganikeli le imithi izingane ngaphandle pre-testing. Kufanele uyeke ekwelapheni "Kogitum" izidakamizwa uma kwenzeka ukuthi engu-ingane eneminyaka engaphansi kwengu-7. ukuhlolwa Clinical iziguli kuleli qoqo leminyaka batholakale ayizange iphumelele.
Ngamunye kunqunywa isikhathi sokwelashwa isidingo inkambo uphinda yokwelapha. Izidakamizwa e adaptogenic "Kogitum" isixazululo, umthamo incike yobudala lesiguli, ngokuvamile kufanele kuthathwe amasonto amathathu.
Isixazululo has a emnandi banana ukunambitheka ngakhoke ibonwa kahle izingane. Kusho akhiqizwa uhlobo ampoules nge semikhawulweni ezicijile nhlangothi zombili. Kuvuleka ngaphambi izidakamizwa eyanele. Ukuze wenze lokhu, kuzomele uqale ngiwunqamule ukuphela igobolondo ngesandla esisodwa, beka endishini ingilazi phezu inkomishi uphinde njalo kolunye uhlangothi manipulation. Ngemva izenzo ngaphezu izidakamizwa kuthululwe kalula lesi sitsha.
Ngaphambi ozithathayo "Kogitum" kufanele ufunde ngokucophelela isichasiselo. Umenzi uncoma ukuthi iziguli omdala ukuthatha kwezidakamizwa 3 amaphilisi ngosuku. Futhi ekuseni udinga baphuze ngesikhathi esifanayo okuqukethwe izitsha eziyisikhombisa ezimbili.
Izingane Ezisathomba (iminyaka 10-18) ukuthola isixazululo izidakamizwa amahora ama-2 ku-ampoule. Izingane eminyakeni 7-10 abeke umfuma lesi sidakamizwa "Kogitum". Intengo zomuthi siphakeme ngokwanele (mayelana 3.600 ruble), kodwa ngokuhamba yokwelapha ingane kuleli qoqo leminyaka batholakale kuyoba okwanele kwelinye iphakethe zomuthi.
Odokotela batusa ukuthatha izindlela ekuseni. Uma kunesidingo, ukuphathwa kungenziwa wayeka nganoma yisiphi isigaba. Noma ikuphi ukonakaliswa lokhu ngeke kubangele. Kwezinye izimo, ikhambi ebekiwe izingane ezingaphansi kweminyaka engu-7 ubudala. Umthamo kulokhu ibalwa ngamunye. Ngokuvamile ukuncoma akunika ingane isigamu okuqukethwe eyodwa ampoule ngosuku. Lolu ketshezi ezisele ubekwe kwisiqandisi kuze reception esilandelayo. Kulokhu, ikhambi inzuzo kusukela ampoule usebenzisa isipetu.
Izidakamizwa "Kogitum" e SPP, nezinye pathologies zezinzwa akakwazi ukwamukela zonke iziguli. Naphezu kweqiniso lokuthi umuthi ibekezelelwe ngokuvamile kahle nezingane, kanye nabantu abadala, kumelwe kuqala babe ujwayelene Izimo. isixazululo Okokuqala sinqatshiwe ukuthatha abantu hypersensitivity noma ukungabekezelelani ukuqedela amalungiselelo based atsetilaminoyantarnoy acid.
Ngokusho imiyalelo, umuthi akumele isetshenziswe ekwelapheni izingane ezingaphansi kweminyaka eyisikhombisa. Liphinde ababenukiwe imithi ukuze ingane ngaphandle udokotela.
Kaningi lisetshenziswe zokwelapha ukulungiselela "Kogitum" ngesikhathi kunqanda zokukhuluma. Izibuyekezo lodokotela abonisa ukuthi imithi kahle kubekezelelwe izingane kanye nabantu abadala. Nokho, naphezu kwalokhu, umenzi esixwayisa Ezimweni ezingavamile amathuba okuba nemiphumela engemihle. Ngokuvamile, kuba khona ukusabela iguliswa ukuthatha imithi. Iziguli esekhala ububomvu kwesikhumba, ukulunywa, ukuqubuka.
Yini iziguli uthi?
Iningi leziguli eziza wathatha ejenti aqinisayo ayekulezo "Kogitum" weneliseka umphumela yokwelapha. Izingane eziningi lokhu imithi uye basizwa ukuba babhekane izimpawu kuphazamiseka Neurotic, zokukhuluma ilibele, ukucindezeleka. Kumele kukhunjulwe ukuthi umphumela okusheshayo zomuthi asipheli. Linganisa Imiphumela yokwelapha kumele kube kuphela ngemva Yiqiniso yokwelapha.
Ukuwohloka isimo somntwana iqinile ezimweni ezingajwayelekile. Ngokuvamile, yalokho ezinjalo kungenzeka nge hyperactivity. Izimpawu isimo sokugembula ziqala ukuvela evelele. Noma kunjalo, umenzi akacabangi lokhu wombuso imiphumela emibi yemithi. Ochwepheshe bathi imithi ingaqhutshezwa ngokuhlanganyela sedatives.
Njengoba kuthiwa nomphumela oqabulayo ibangelwa "Kogitum" ekwelapheni ngemiphumela kuhlasimulise okulimala ebuchosheni, izifo ezibangelwa amagciwane. Umthamo kanye nokwelashwa lwemithi okufanele sizimisele udokotela.
Yini esikhundleni "Kogitum"?
Intengo zomuthi - omunye nemibi. Akubona bonke iziguli abakwaziyo ukuthenga imithi enjalo ezibizayo ukuze bathole ukwelashwa. Yingakho abaningi ufuna analogue "Kogituma", okuzodingeka zinemiphumela efanayo zokwelapha kanye ziphephile izingane.
Azikho analogue, okuyinto luqondane ngokugcwele indlela yokwakheka ukulungiselela "Kogitum". Izibhebhe, ukumiswa, izixazululo kokuba indlela efanayo lokwenza kanye izinkomba ukusetshenziswa kumelwe futhi ukhethe onguchwepheshe. Omunye ephumelela kunazo kuleli qembu kwemithi cabanga imithi ezilandelayo:
"Eroteks" (ikhandlela): ukubuyekezwa, imiyalelo, amanani. amakhandlela umuthi "Eroteks"
"Domrid": imfundo manual, ukubuyekezwa kanye analogue
Zinc nokunamathisela: Umhlahlandlela, ukubuyekezwa, analogs
Izidakamizwa "wamafutha Fleming." Yokusetshenziswa
Scott Summers - Series iqhawe movie "X-Men"
Catching ekwindla roach: Tackle kanye lolo
Amaqiniso ethakazelisayo nokuphila UTolstoy. UTolstoy Aleksey Nikolaevich
Popular ukubhula "Abangamakhulu"
Kuyini lwesinaphi igesi?
Owesifazane Snake Aries izici uphawu
Ukuthenga eMadrid izitolo, uphuma khona, Amahora okuvula futhi Isaphulelo omsebenzi. Uphenyo yezitolo e Madrid
Ngenxa "isisusa" ukuxhuma inthanethi: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo zokumisa
Riga - inhloko-dolobha kuliphi izwe? emazweni aseBaltic kumephu emhlabeni
Umuthi 'Bronhogen ": libuyekeza ababhemayo
I-Crankshaft - inhliziyo yenjini
Imithombo yashisayo, esifundeni saseKrasnodar. Phumphuka emithonjeni elishisayo